Manazava ny fomba hiadiana amin'ny maloto amin'ny botnet ny Semalt
Ny fampiasana botnets dia zava-mitranga vao haingana. Ny fampiasana azy ireo amin'ny fanafihana nandritra ireo folo taona lasa dia niteraka fahasimbana sarobidy ho an'ireo tra-boina. Noho izany, misy ezaka maro atao amin'ny fiarovana amin'ny aretina botnet, na manidy azy ireo amin'ny toerana rehetra raha azo atao.
7) Nanazava i Ivan Konovalov, manam-pahaizana Semalt , fa ny teny botnet dia misy teny roa: Bot, izay manondro solosaina mitondra otrik'aretina, ary Net izay andianà tambajotra mifamatotra. Tsy azo atao ho an'ny olona izay mampivoatra sy manara-maso ny malware mba hampiasa ireo ordinatera izay hack izy ireo amin'ny tanana. Noho izany, vokatra azo avy amin'ny fampiasana botnets izay manao izany faingana. Ny malware dia mampiasa ny tambajotra halefa any amin'ny ordinatera hafa.
Rehefa tratry ny malware ny solosainao ary lasa ampahany amin'ny botnaila, ny iray manara-maso azy dia afaka manatanteraka ny lamin'asa lavitra. Ireo hetsika ireo dia mety tsy ho hitan'ny olona amin'ny fampiasana bandwidth aterineto ambany. Ny vokatra malware dia ny fomba tsara indrindra hahitana ny fisian'ny malware. Na izany aza, ireo mpampiasa teknika dia afaka mijery ireo programa izay mihazakazaka na mipetraka ao amin'ny rafitra.
Ny botnet dia asan'ny olona manana fikasana ratsy. Manana fampiasana marobe izy ireo toy ny fandefasana spam sy fangalarana vaovao. Ny lehibe kokoa ny isan'ireo "bots" ao amin'ny fananana iray, ny manan-danja kokoa ny fahasimbana mety hiteraka. Ohatra, ireo andian-jiolahy nokarakarain'ny mpanao heloka bevava dia mampiasa botnets mba hangalaran'ny fampiasana ara-bola ny fanaovana hosoka, na hitsikilo ireo mpampiasa tsy mitandrina ary hampiasa ireo vaovao tsy ara-dalàna mba hakana azy ireo.
Ny server sy baikon'ny mpanara-maso dia manjary voalohany amin'ny teboka fototra izay ahafahan'ny solosaina mifandray amin'ny tambajotra. Ho an'ny ankamaroan'ny botnets, raha mandingana ny server sy baiko, dia potipotika ny botnet manontolo. Misy anefa ny tranga sasany amin'izany. Ny voalohany dia izay ampiasain'ny botnets mifandray amin'ny peer-to-peer ary tsy manana baiko sy mpanara-maso. Ny faharoa dia ny botnets izay manana server mandidy sy mifehy maro any amin'ny firenena samihafa..Sarotra ny manakana ny botsika mametraka an'io famaritana io.
Ireo loza mety hatahoran'ny olona amin'ny programa malware koa dia ampiharina amin'ny botnets. Ny fanafihana matetika dia ny fangalarana fampahalalana mafonja, mpanodina tranonkala mandroso amin'ny fikasana hampidina azy ireo na mandefa spam. Ny solosaina finday izay ampahany amin'ny botnet dia tsy an'ny tompony. Ilay mpanafika dia mandrindra izany ary matetika amin'ny asa tsy ara-dalàna.
Mampidi-doza ho an'ny orinasam-pambolena sy ny fitaovana manokana ny botnets. Na izany aza, ny fitaovan'ny orinasa dia manana fiarovana tsara kokoa sy manara-maso ireo protocols. Tsy midika akory izany fa manana tahiry misimisy kokoa izy ireo mba hiarovana.
Tsy misy vondron'olona manokana noho ny iray hafa. Ny malware ampiasaina dia afaka manova endrika isan-karazany arakaraka ny vondron'olona kinendry.
Conficker no botnet ny lehibe indrindra amin'izao fotoana izao satria fantatra fa nanindrona haingana ny solosaina. Na izany aza dia tsy nampiasa izany ireo mpandraharaha noho ny fisongadinan'ny maro sy ny fanaraha-maso izay noraisiny avy amin'ny fikambanana mpikaroka. Ny hafa dia tafiditra ao anatin'ny tafio-drivotra sy TDSS.
Nahita botnet ny ESET vao haingana tamin'ny fanadihadiana nataony tamin'ny Operation Windigo. Nahasintona mpanjohy mihoatra ny 25.000 izy io. Ny tanjon'izy ireo dia ny manova ny votoatiny ratsy amin'ny ordinateran'ny mpampiasa, mangalatra ny fahazoan-dalany, ary mandefa hafatra spam mba hifaneraserany amin'ireo solosaina ireo.
Tsy misy rafitra fiasa tokana azo antoka amin'ny fanafihana rindrambaiko maloto. Ny olona mampiasa ny fitaovana Mac dia mahazatra ny malaky Flashback.
Manohitra ny Botnets
Ny programa fanoherana malware dia toerana hanombohana amin'ny ady amin'ny botnets. Ny famantarana ny malware mety amin'ny serasera dia mora
Mampitombo ny fahatsiarovan-tena sy mampianatra olona momba ny loza mitatao. Ilaina ny olona hahatsapa fa mampidi-doza ny ordinatera sy ny hafa.
Raiso ny solosaina rehetra tsy hita maso ary araho tsara ny fisavana ny safidy mba hahazoana antoka fa madio izy ireo
Ezaka iombonana avy amin'ny mpampiasa, mpikaroka, ISP, ary ny manampahefana Source .